ESI GBANYỤỌ ONYE NCHE WINDOWS - WINDOWS - 2019
Esi gbanyụọ onye nche Windows
Onye nchekwa Windows (ma ọ bụ Windows Defender) - Microsoft antivirus wuru n'ime OS ọhụrụ - Windows 10 na 8 (8.1). Ọ na-arụ ọrụ site na ndabara ruo mgbe ị wụnye antivirus ọ bụla ọzọ (na mgbe echichi, oge antiviruses nke oge a gbanyụọ Windows Defender.) N'ezie, na nso nso a, ọ bụghị ihe niile) na-enye nchedo nje na malware (ọ bụ ezie na nnyocha ndị na-adịbeghị anya na-atụ aro na ọ dịla mma karịa ya). Hụkwa: Otu esi enyere onye nchebe Windows 10 aka (ọ bụrụ na ọ na-ede na usoro a enweghị nkwarụ site na Nkwekọrịta Group).
Ntuziaka a na-enye nkọwa nkwụsịtụ site na iji wepu Windows Defender 10 na Windows 8.1 n'ọtụtụ ụzọ, nakwa otu esi echegharị ya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Nke a nwere ike ịdị mkpa na ụfọdụ mgbe antivirus ahụ ewunyere adịghị ekwe ka ịwụnye usoro ma ọ bụ egwuregwu, na-eche na obi ọjọọ, na ikekwe na ọnọdụ ndị ọzọ. Nke mbụ, a kọwara usoro mgbachi na Windows 10 Creators Update, mgbe ahụ na nsụgharị ndị ọzọ nke Windows 10, 8.1, na 8. A na-enyekwa usoro mmechi ọzọ na njedebe nke ndu (ọ bụghị site na ngwaọrụ). Rịba ama: ọ nwere ike ịbụ ihe ezi uche dị na ya ịgbakwunye otu faịlụ ma ọ bụ folda na-ewepu nchekwa nchekwa Windows.
Ihe edeturu: ọ bụrụ na Windows Defender dere "Ngwa Ngwaọrụ" ma na ị na-achọ ihe ngwọta maka nsogbu a, ị nwere ike ịchọta ya na njedebe nke nduzi a. N'okwu mgbe ị gbanyuru onye nchedo Windows 10 n'eziokwu na ọ gaghị ekwe ka ị na-agba ọsọ ọ bụla ma ọ bụ na-ewepu faịlụ ha, ị nwekwara ike iwepụ SmartScreen iyo (ebe ọ pụkwara ịkpa àgwà dị otú a). Ihe ọzọ nwere ike ịmasị gị: Nke kacha mma antivirus maka Windows 10.
Nhọrọ: na mmelite nke Windows 10 ọhụrụ, akara ngosi Windows Defender na-agbagha na mpaghara ngosi ọrụ.
Ị nwere ike iwepu ya site na ịga na njikwa ọrụ (site na ịpị aka bọtịnụ Malite), gbanwee echiche zuru ezu na gbanyụọ ihe ngosi ihe ngosi Windows Defender na "Mmalite" taabụ.
Na ntinye ozokwa, akara ngosi agaghi egosiputa (ma, onye agbachitere ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ). Ihe ohuru ohuru bu uzo di iche iche nke onye nyocha ule Windows 10.
Esi gbanyụọ Windows Defender 10
Na nsụgharị ọhụrụ nke Windows 10, ịkwụsị Windows Defender agbanweela n'ụzọ dị nro ma e jiri ya tụnyere nsụgharị ndị gara aga. Dị ka ọ dị na mbụ, enwere ike ịkwụsị ya site n'iji parameters (ma na nke a, antivirus ahụ wuru na-enwe nkwarụ nanị ruo nwa oge), ma ọ bụ na-eji nchịkọta iwu nke obodo ahụ (maka Windows 10 Pro na Enterprise naanị) ma ọ bụ editọ ndekọ.
Mgbaghara nwa oge nke antivirus wuru na-eji ntọala ntọala
Gaa na "Ụlọ Nche Nchebe Windows". Enwere ike ime nke a site na ịpị na akara ngosi na akara ngosi na mpaghara ngosi na nri aka nri ma na-ahọpụta "Mepee", ma ọ bụ na Nhọrọ - Mmelite na Nche - Defender Windows - Mepee bọtịnụ Windows Defender Security Center.
Na Ụlọ Nche, họrọ Windows Settings Defender Settings (akara ogwe), wee pịa "Ntọala maka nchedo nje na egwu ndị ọzọ."
Gbanyụọ "Nchedo oge" na "Nchedoigwe".
Na nke a, onye agbachitere Windows ga-enwe nkwarụ naanị ruo nwa oge na n'ọdịnihu usoro ahụ ga-eji ya ọzọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ya kpamkpam, ị ga-achọ iji usoro ndị a.
Rịba ama: mgbe ị na-eji ụzọ akọwapụtara n'okpuru, ikike ịmepụta ọrụ nke onye na-agbachitere Windows na njedebe ga-adị arụ ọrụ (rue mgbe ị laghachiri ụkpụrụ gbanwere na nchịkọta akụkọ na ndabara ndabara).
Disable Windows 10 Defender na Mpaghara Group Policy Editor
Usoro a bụ naanị adaba maka mbipụta nke Windows 10 Ọkachamara na Ụlọọrụ, ọ bụrụ na ị nwere Home - na mpaghara na-esote, a na-enye ntụziaka site na iji ndekọ Editor.
Pịa igodo Win + R na keyboard wee banye gpedit.msc
N'akwụkwọ Editor Group nke na-emepe emepe, gaa na mpaghara "Nhazi Kọmputa" - "Ihe Nlereanya Nlekọta" - "Ihe Ndị Windows" - "Antivirus Program Windows Defender".
Pịa nhọrọ abụọ "Gbanyụọ antivirus program Windows Defender" wee họrọ "Kwadoro" (dịka - - "Kwadoro" ga-ehichapụ antivirus).
N'otu aka ahụ, gbanyụọ nhọrọ ndị a "Kwado mmeghe nke ọrụ anti-malware" na "Kwe ka ọrụ ọrụ anti-malware na-aga n'ihu" (setịpụrụ "Onye nkwarụ").
Gaa na ngalaba "Nchedo oge", pịa okpukpu abụọ nke "Gbanyụọ nchebe n'ezie" ma debe "Kwadoro".
Tụkwasị na nke a, gbanyụọ nhọrọ ahụ "Nyochaa faịlụ na nbudata niile ebudatara" (ebe ị ga-edozi "Onye nkwarụ").
Na mpaghara "MAPS", gbanyụọ nhọrọ niile ma e wezụga "Zipụ faịlụ faịlụ".
Maka nhọrọ "Zipu faịlụ nlele ma ọ bụrụ na achọrọ nyocha ọzọ" setịpụ "Kwado", nakwa na aka ekpe (n'otu window ntọala ntọala) setịpụrụ "Ya adịla mgbe izipu".
Mgbe nke ahụ gasịrị, nchekwa Windows 10 ga-enwe nkwarụ kpamkpam ma ọ gaghị emetụta mwepụta nke mmemme gị (ma zipụkwa ihe omume mmemme nye Microsoft), ọbụlagodi na ha nwere obi abụọ. Tụkwasị na nke a, ana m akwado iwepụ akara ngosi Windows Defender na ebe ngosi site na akpaaka (lee Ịmalite mmemme Windows 10; ụzọ na onye njikwa ọrụ dị mma).
Otu esi ewepu nchekwa Windows 10 kpam kpam site na iji ndekọ Editor
Ntọala ndị ahaziri na nchịkọta akụkọ nke obodo ahụ nwere ike ịtọ na nchịkwa edetu, si otú ahụ na-egbochi antivirus ahụ wuru.
Usoro ga-abụ dị ka ndị a (dee: na enweghị nke ọ bụla n'ime ngalaba ndị a, ị nwere ike ịmepụta ha site na ịpị aka na "folda" otu larịị na ịhọrọ ihe achọrọ dị na nhọrọ ebe a):
Pịa Mmeri R, tinye regedit ma pịa Tinye.
Na nchịkọta akụkọ, gaa HKEY_LOCAL_MACHINE Software na Ikike nke Microsoft Defender
N'akụkụ aka nri nke editọ ndekọ, pịa aka nri, họrọ "New" - "DWORD 32 bits" (ọbụlagodi ma ọ bụrụ na i nwere usoro 64-bit) ma debe aha nke oke DisableAntiSpyware
Mgbe ịmepụtara oke, pịa ya abụọ ma setịpụ uru ya na 1.
N'otu ebe ahụ mepụta parameters AllowFastServiceStartup ma ServiceKeepAlive - uru ha kwesiri ibu 0 (zero, setịpụrụ na ndabara).
Na Ngalaba Defender Windows, họrọ Oge Nchekwa Oge Na-adịghị Anya (ma ọ bụ mepụta ya), na ya na-emepụta parameters na aha DisableIOAVProtection ma Akwụsị oge ọhụụ
Pịa okpukpu abụọ na nke ọ bụla n'ime paradaịs ndị a ma debe ọnụọgụgụ na 1.
Na ngalaba Windows Defender, mepụta Spykey subkey, mepụta DWORD32 sokwa na aha ya DisableBlockAtFirstSeen (uru 1) LocalSettingOverrideSpynetReporting (uru 0), Ihe Ntuzi Akwukwo (uru 2). Omume a na-egbochi ịlele igwe ojii na igbochi mmemme ndị a na-amaghị.
Emeela, mgbe ahụ i nwere ike mechie edetu ndekọ, a ga-enwe nkwarụ antivirus. Ọ dịkwa mkpa iji wepu Windows Defender site na mbido (na-eche na ị naghị eji njirimara ndị ọzọ nke "Ogige Nchedo Windows Defender").
I nwekwara ike gbanyụọ onye na-agbachitere site na iji mmemme ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, ọrụ dị otú ahụ bụ na Dism ++ n'efu
Gbanyụọ ndị nche Windows 10 na Windows 8.1
Ihe ndị dị mkpa iji gbanyụọ Windows Defender ga-adị iche na nsụgharị abụọ nke sistemụ arụmọrụ Microsoft. N'ikpeazụ, ọ bụ iji malite usoro ndị a na OSs (ma maka Windows 10, usoro nke kpamkpam onye nchebe ahụ dịtụ mgbagwoju anya, mgbe ahụ anyị ga-akọwa ya n'ụzọ zuru ezu n'okpuru ebe a)
Gaa na nchịkọta nchịkọta: ụzọ kachasị mfe na ngwa ngwa iji mee nke a bụ iji aka nri pịa bọtịnụ "Malite" ma họrọ ihe ederede kwesịrị ekwesị.
Na nchịkwa nchịkwa, gbanwere na "Iyi" (na "View" ihe dị na nri aka nri), họrọ "Onye Nche Windows".
Isi windo Windows Defender ga - amalite (ọ bụrụ na ị hụ ozi na "Ngwa ahụ nwere nkwarụ ma ọ dịghị nyochaa kọmputa ahụ," mgbe ahụ ị nwere ike iji antivirus dị iche). Dabere n'ụdị os nke ị rụnyeworo, soro usoro ndị a.
Ụzọ nhazi (nke anaghị arụ ọrụ zuru ezu) nke ịhapụ Windows 10 nchebe dị ka ndị a:
Gaa na "Malite" - "Ntọala" (akara ngosi na gia) - "Imelite na Nche" - "Onye Nche Windows"
Gbanyụọ ihe "Nchedo oge".
N'ihi ya, a ga - enwe nkwarụ, ma ọ bụ naanị ruo nwa oge: mgbe ihe dị ka nkeji 15 ga - agbanyeghachi.
Ọ bụrụ na nhọrọ a adabaghị anyị, mgbe ahụ, e nwere ụzọ iji gbanyụọ Windows Defender na kpamkpam n'ụzọ abụọ - na-eji nchịkọta isiokwu obodo ma ọ bụ editọ ndekọ. Usoro ya na onye nchịkọta isiokwu nke obodo adịghị adabara maka Windows 10 Home.
Iji gbanyụọ iji iji nchịkọta isiokwu nke obodo ahụ:
Pịa igodo Win + R na pịnye gpedit.msc na windo ọsọ.
Gaa na Nhazi Kọmputa - Ntọala nchịkwa - Ihe ndị dị na Windows - Usoro mmegide nje Windows Defender (na nsụgharị sitere na Windows 10 ruo 1703 - Nchebe nkwụsị).
N'akụkụ aka nri nke onye nchịkọta iwu obodo, pịa okpukpu abụọ gbanyụọ usoro antivirus ihe Windows Defender (nke mbụ - Gbanyụọ Nchekwa Endpoint).
Dezie "Kwadoro" maka oke a ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwepu onye na-agbachitere, pịa "OK" ma wepụ nchịkọta akụkọ ahụ (na nseta ihuenyo dị n'okpuru ebe a, a na-akpọ ntọala Gbanyụọ Windows Defender, nke a bụ aha ya na Windows 10. Ugbu a - Gbanyụọ usoro antivirus ma ọ bụ gbanyụọ Endpoint Nchedo).
N'ihi ya, a ga-akwụsị ọrụ Windows 10 (yabụ, ọ ga-edozi kpamkpam) ma ị ga-ahụ ozi mgbe ị na-agbalị ịmalite nchekwa Windows 10.
I nwekwara ike ime otu omume ahụ site na iji nchịkọta akụkọ:
Gaa ndekọ editọ (merie R igodo, tinye regedit)
Gaa na igodo ndekọ HKEY_LOCAL_MACHINE Software na Ikike nke Microsoft Defender
Mepụta aha DWORD aha ya DisableAntiSpyware (ma ọ bụrụ na ọ naghị anọ na ngalaba a).
Debe nke a ka ọ bụrụ 0 ka agbanyụọ Windows Defender ma ọ bụ 1 ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanyụ ya.
Emeela, ugbu a, ọ bụrụ na antivirus ahụ wuru na Microsoft na ị ga-enwe nsogbu, mgbe ahụ ọ bụ naanị ọkwa na enwere nkwarụ. N'okwu a, tupu mmaliteghachi nke kọmputa ahụ, na ebe ngosi ọrụ ọrụ ị ga-ahụ akara ngosi nchekwa (mgbe ọ gbanyechara, ọ ga-apụ n'anya). Ihe ngosi ga - egosikwa na nchedo nje nwere nkwarụ. Iji wepu ọkwa ndị a, pịa ya, wee banye na windo na-esote, pịa "Adịghị enweta ọkwa ndị ọzọ gbasara nchedo nje virus"
Ọ bụrụ na mwepụ nke antivirus ahụ arụpụtara adịghị eme, mgbe ahụ, e nwere nkọwa nke ụzọ iji gbanyụọ nchekwa nchekwa Windows site na iji mmemme free maka nzube a.
Ịkwụsị Onye Nkwado Windows 8.1 dị mfe karịa na mbipute gara aga. Ihe niile ị chọrọ bụ:
Gaa na Ogwe njikwa - Defender Windows.
Mepee taabụ "Ntọala" wee bụrụ "Onye nchịkwa" ihe.
Chọta "Kwado Ngwa"
N'ihi ya, ị ga-ahụ ọkwa na ngwa ahụ ejirila ya ma ọ dịghị nyochaa kọmputa - ihe dị anyị mkpa.
Gbanyụọ Windows Defender na Free Software
Ọ bụrụ, n'ihi otu ihe ma ọ bụ ọzọ, ọ gaghị ekwe omume iwepu Windows 10 Defender na-enweghị iji mmemme, ị nwekwara ike ime nke a site na iji ụlọ ọrụ free n'efu, n'etiti nke m ga-akwado mmeri mmelite onye nkwarụ, dịka dị mfe, na-enweghị uru na n'efu na Russian.
E kere usoro ahụ ka ị gbanyụọ mmelite akpaka nke Windows 10, ma ọ nwere ike iwepu (na, dị mkpa, gbanwee ya) ọrụ ndị ọzọ, gụnyere nchekwa na firewall. Ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti nke usoro ihe omume ahụ ị nwere ike ịhụ na nseta ihuenyo n'elu.
Nke abụọ bụ iji Destroy Windows 10 Nledo ma ọ bụ DWS bara uru, nzube bụ isi iji kwụsị ọrụ nchikota na os, ma na usoro ihe omume ahụ, ọ bụrụ na ị megharịrị ọnọdụ dị elu, ị nwekwara ike iwepu Windows Defender (Otú ọ dị, ọ na-agbanyụ na usoro a ma ndabara).
Esi gbanyụọ ihe nchebe Windows 10 - nkuzi vidiyo
N'ihi eziokwu ahụ bụ na arụmụka akọwapụtara na Windows 10 abụghị nke mbụ, m na-atụ aro ikiri vidiyo, nke gosipụtara ụzọ abụọ iji gbanyụọ onye nchekwa Windows 10.
Gbanyụọ onye nche Windows site na iji akara iwu ma ọ bụ PowerShell
Ụzọ ọzọ iji wepu Windows 10 onye nchedo (ọ bụ ezie na ọ bụghị na-adịgide adịgide, mana naanị nwa oge - yana mgbe iji nghazi) bụ iji iwu PowerShell. Windows PowerShell ga-agba ọsọ dị ka onye nchịkwa, nke a ga-eme site na iji ọchụchọ ahụ na ngalaba ọrụ, wee pịa ọnụọgụ menu.
Na windo PowerShell, dee iwu ahụ
Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring $ eziokwu
Ozugbo e gbusịrị ya, nchedo oge nche ga-enwe nkwarụ.
Iji otu iwu ahụ na akara iwu (na-agba ọsọ dị ka onye nchịkwa), dị nnọọ pịa ike na ohere n'ihu ederede iwu.
Gbanyụọ ozi "Kwado nje virus"
Ọ bụrụ na mgbe emechara ihe iji gbanyụọ Windows 10 Protector, ọkwa "Kwado nchebe nje. Nchebe antivirus nwere nkwarụ" na-egosi mgbe niile, wee wepụ ọkwa a, ịnwere ike ịgbaso usoro ndị a:
Jiri nchọta na ngalaba ọrụ iji gaa "Ụlọ Nche na Ọrụ" (ma ọ bụ chọta ihe a na nchịkwa nchịkwa).
Na "Nche" ngalaba, pịa "Adịghị enweta ozi ndị ọzọ na isiokwu nke nchedo nje virus."
Emere ya, n'ọdịnihu ọ gaghị adị gị mkpa ịhụ ozi ndị akwadoro Windows.
Onye nchekwa Windows na-ede Ngwa ejiri (otu esi eme ka)
Nwelite: kwadebere ntụziaka emelitere na nke zuru oke na isiokwu a: Otu esi eme ka nchekwa Windows 10. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere Windows 8 ma ọ bụ 8.1 arụnyere, jiri usoro ndị a kọwara n'okpuru.
Ọ bụrụ na ịbanye na nchịkwa nchịkwa ma họrọ "Onye Nche Windows", ịhụ ozi na-ekwu na ngwa ahụ adịghị nkwarụ ma ọ dịghị nyochaa kọmputa, nke a nwere ike ịpụta ihe abụọ:
Onye nkwado Windows kwadoro n'ihi na arụnyere antivirus dị iche iche na kọmputa gị. N'okwu a, ịkwesịrị ime ihe ọ bụla - mgbe ị wepụsịrị usoro mmemme nje ndị ọzọ, ọ ga-agbanye na akpaghị aka.
Gị onwe gị gbanyụọ onye nche Windows ma ọ bụ agbanyụrụ ya maka ihe ọ bụla, ebe ị nwere ike ịgbanwuo ya.
Na Windows 10, iji mee ka Windows Defender, ị nwere ike ịpị ozi ziri ezi na ebe ngosi - usoro ahụ ga-eme ihe fọdụrụ gị. Ewezuga ikpe ahụ mgbe ị na-eji nchịkọta iwu obodo ma ọ bụ nchịkọta editọ (n'ọnọdụ a, ị ga-eme ọrụ ọzọ iji gbanye onye na-akwado ya).
Iji mee ka nchebe Windows 8.1, gaa na Center Nkwado (pịa nri "nlele" na mpaghara ngosi). O yikarịrị ka ị ga-ahụ ozi abụọ: na nchebe site na spyware na mmemme ndị a achọghị ka agbanyụrụ na nchebe megide nje virus agbanyụ. Naanị pịa "Kwado Ugbu a" ka ị malite Red Defender ọzọ.